at 5:08 PM Labels: အထွေထွေ
လုလု နေမကောင်းလို့ လာမယ့်ပိတ်ရက်အတွက် ဟင်းအစပ်ကို မတင်လိုက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။
နေကောင်းတာနဲ့တပြိုင်နက် မောင်နှမများကို ဟင်းအသစ်တွေ ထပ်ချက်ကျွေးပါမယ်နော်။
စန္ဒကူး September 3, 2009 at 10:13 AM
ကူးကူးဆုတောင်းပေးတယ်သိလား.. မနေ့က ကတည်းက...
ဆေးလဲမှန်မှန်သောက်နော်... မမရှင်မင်းကိုလဲ ကျေးဇူးပါ။ မမလုကို ဂရုစိုက်ပေးလို့...
I can not type Burmese.
But really appreciate your site.
I would like to know the recipe for
Mont On Nauk ( Brain cake dessert)
Wish u recover soon.Take care.
မိုးကောင်းသူ September 4, 2009 at 6:46 PM
subuueain September 7, 2009 at 11:35 AM
မမလု နေကောင်းပါစေနော် ဆုတောင်းပေးပါတယ်
Unknown September 16, 2009 at 4:03 PM
Moe Cho Thinn September 19, 2009 at 3:31 AM
ဟင်းတွေ အကုန်မေ့သာထားလိုက် ညီမလေး။
ကျန်းမာရေးသာလျှင် နံပါတ် ၁။
အခုတော့ နားပါ၊ အေးအေးဆေးဆေး အနားယူပါ။
မြန်မြန်နေကောင်း ကျန်းမာပါစေလို့ ဆုတောင်းလျက်ပါ ညီမလေးရေ။
လုလု September 22, 2009 at 10:41 AM
နေမကောင်းစဉ် ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ မောင်နှမများအားလုံး၊ အားပေးကြတဲ့ မောင်နှမများအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော်။ အရမ်းကို နွေးထွေးတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါဘူးနော်။
Unknown September 29, 2009 at 1:17 AM
hello ma ma lulu
ဒီနာမည်ကိုခေါ်ရတာ စိတ်ထဲမှာအရမ်းရင်းနှီးပြီး ငယ်ဘဝကိုသတိရမိပါတယ်။ အချိန်နည်းနည်းပေးနိုင်မယ်ဆို မမ ရဲ့ ငယ်ဘဝကို သိချင်ပါတယ်...အထူးသဖြင့် ဘယ်မှာနေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပေါ့...ညီမမှာ ငယ်ငယ်က အရမ်းသတိရစရာကောင်းတဲ့ အတိတ်တစ်ခုရှိတယ်...အတိတ်က မမလုလုနဲ့ ကိုကိုနောင်နောင် ကိုအရမ်းသတိရတယ်...သူတို့ကိုအရမ်းတွေ့ချင်ပါတယ်...ဖြစ်နိုင်မယ်ဆို ပြောပြပေးပါနော်...LLN
လုလု October 2, 2009 at 10:29 AM
နန်ဒီရေ့့့ 
မမလုက မော်လမြိုင်ကပါနော်။ ညီမလေးက ဘယ်သူလဲ မသိဘူးနော်။ ညီမလေးကို မမမေးလ်မှာ အင်ဗိုက်လုပ်လိုက်ပါမယ်။